> Resource > Utility > Sida loo dayactir Boot.ini oo maqan
Waa maxay file Boot.ini?
Boot.ini waa Windows NT / 2000 / XP / Server 2003 file qarsoon qoraalka ay ku jiraan macluumaadka loo baahan yahay in la dhiso loader boot menu. Waxaa inta badan ku yaala xididka C drive. Waxaa sida caadiga ah bixisaa users ikhtiyaarka ah in la doorto nidaam si ay u helaan marka ay ku rakiban yihiin hawlgalka nidaamyo badan kombiyuutarka.
Tayeeyo file hababka boot.ini la Windows OS CD ka computer ah oo aan la bilaabi karaa.
1. Geli Windows 2000 / XP / 2003 CD-ROM.
2. Guuleysatey your computer.
3. Marka dhalisay in "riix furaha kasta si kabaha ka CD", riix "Space" bar.
4. Marka "Welcome to Setup" fariin, saxaafadda "R" inuu ku soo bilowdo ka "Recovery tacsiyeeyaan".
5. Markaasay aad u baahan tahay in ay doortaan Operation System aad ku socoto in ay isticmaalaan. Haddii aad multi-boot computer this, dooro rakibo ee Windows XP in ku guuldareystay inuu ku soo bilowdo.
6. Marka looga baahan yahay password waxa keenay in shaashada, fadlan ku qor password maamulaha iyo saxaafadda "gala".
7. Marka si degdeg ah amarka u furmo, bootcfg nooca / liiska iyo saxaafadda "gala" in uu soo bandhigo entries ee faylka boot.ini.
8. Nooca bootcfg / dhiska iyo saxaafadda "gala" in baarista drives adag tahay goobaha Windows NT-ku-saleysan.
Raac tilmaamaha ku-screen in la rakibo daro in faylka boot.ini.
9, Marka dhammaan fursadaha la heli karo oo la sameeyo, waxaad dib ugu noqon kartaa in computerka. Arrinta boot.isi ayaa markaas fadhiya.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan haysan Windows OS CD, xal aan kuu shaqaynayaan.
U dayactir Boot.ini on Computer Working
Hubi sababaha Boot.ini arrinta la waayay
Haddii aad heshay fariin qalad ah oo leh "wixii aan baalal karaa C ah:? File oot.ini" ama "aan saxnayn Boot.ini, loading ka C: Windows", waxaa jiri lahaa khaladaadka uu keeno sabab u tahay file Boot.ini kharribeen ama la la'yahay. Waxaad ku hubin kartaa sida hoos ku qoran:
1. Nooca "MSCONFIG" in "bilow", iyo waxa maamula. Hadii faylka wax Boot.ini maqan yahay, mana jiri doonaan tab Boot.ini soo bandhigay "System qaabeynta Utility" guddiga sida image hoose.
2. Waxa kale oo ay u Waxaad xaqiijin kartaa adigoo garaacaya ereyada "C: Boot.ini" in "Start", wada hadal ay maamulaan. Haddii aad heshid fariin ah "Access diiday" ama fariimaha qalad la mid ah, kaasi oo sharaxaya dhibaatada.
U dayactir dhibaato Boot.ini ka maqan
, Hadii faylka la rakibo nidaamka ee asalka u ah C drive, weli waxaad bilaabi kartaa adiga oo computer la Boot.ini ku maqan, halka ma ahan in C drive waxba kama qaban karto. Dhab ahaantii, sida keli ah dadka isticmaala nidaamka, file nidaamka waxaa had iyo jeer lagu rakibay ee asalka u ah C drive. Markaas sida loo xaliyo dhibaato file maqan Boot.ini? Halkan xal aad u.
1. Xaqa guji My Computer Guryaha Advanced xawaaladaha iyo Soo-kabashada, guji Settings.
2. Riix "Edit" oo ku meel cas ee sawirka hoos ku qoran. 3. Markaasay aad file boot.ini u furnaan doonaa, laakiin haddii ay jiraan mid ka mid ma aha, waxaad riixi kartaa "OK" si ay u abuuraan mid cusub. 4. Hadda nuqul oo paste code soo socda waxa ku jira. [loader boot] fekero = 30 = default multi (0) disk (0) rdisk (0) xijaab (1) WINDOWS [hawlgala nidaamka] multi (0) disk (0) rdisk ( 0) xijaab (1) WINDOWS = "Microsoft Windows XP Professional" / fastdetect
Fiiro gaar ah: fekero = 30 Marka menu boot la bilaabay iyo dadka isticmaala ma samayn hawlgal kasta oo 30 ilbiriqsi, ka dibna waxa ay heli doontaa nidaamka caadiga ah si toos ah. 30 ilbiriqsi waa markii caadiga ah, haddii aad qabto mid ka mid ah nidaamka, waxa aad sameyn kartaa sida 0. wakhtiga kale ee ku xusan waxaad u malaynaysaa in ay tahay OK haddii aad leedahay nidaamka badan. default = multi (0) disk (0) rdisk (0) xijaab (1) WINDOWS Tani waa habka caadiga ah. xijaab (1) WINDOWS qayb Tani had iyo jeer waa edit mid aan ku. Barzakh (1) waxay ka dhigan tahay Risaalo ka hore, sida caadiga ah drive ka C, iyo daaqadaha waa folder nidaamka. Haddii aad dooneyso inaad XP ee drive D sida nidaamka default aad, waa in aad xaalkaa sida xijaab (2) WINDOWS . multi (0) disk (0) rdisk (0) xijaab (1) WINDOWS = "Microsoft Windows XP Professional" / fastdetect qayb Tani waa isla sidii "default" qayb, iyo Microsoft Windows XP Professional waa magaca nidaamka. / fastdetect: badan oo websites ku talinaynaa in la saxaa sida "nodetect".
5. Riix "Save" iyo ka bixitaanka.
6. A boot.ini file cusub la abuuri doonaa drive C on your computer ah, hadda waxaan u baahanahay inaan ku siin sifooyinka nidaamka.
7. Amarka Open degdeg ah (guji "Start" on your computer, iyo nooca "Lauch" sanduuqa baxsad).
8. Markaasuu ku qor soo socda amarka attrib C:? oot.ini + s + h iyo saxaafadda "gala". 9. Waxaad xalliyo dhibaatada hadda.